AASAASKA CAQIIDADA ISLAAMKA(Su’aalo Iyo Jawaabo) | AHLUSUNNA WALJAMAACA SOMALIYA
Xadiiska: “Addoonka waxaa laga yaabaa in uu ku hadlo eray asiga oo aanan wax dhib ah u arag kaas oo laga yaabo in uu ku fogayo naarta toddobaatan gu'”. Waxaa weriyay at-Tirmidi.
Posted by ahlusunnah on Febraayo 20, 2007 at 8:22 b
Previous Entry: AASAASKA CAQIIDADA ISLAAMKA
Next Entry: Gaalkacyo:Sheekh C/Risaaq Yuusuf Aadan oo Muxaadaro aad loo jecleystay ku qabtay Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug
asc wr wb ,walaalayaal waxaan rabaa in aan ogaada shiiqa ka jawaabey su,aalahan.
Posted on Maarso 14, 2007 9:54 b
Walaal السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
walaal waad ku mahadsantahay booqashadaada aad nasoo booqatay,sidoo kalana waxaad aad ugu mahadsantahay su’aashaada,runtii waa su’aal aad u muhiimsan waayo qofkii cilmi qaadanaya waa inuu yaqaanaa cida uu cilmiga ka qaadanayaa waana shay la is faray oo aad ugu weyn dinta islaamka si xujo iyo cadayn uu uhelo.
hadaan usoo dhaadhaco su’aashaada,walaal anagu waxaan kasoo xiganay mawduucaan websiteka ahlusunnada ee isna layiraahado http://www.2garre.com halkaasaad faafhfaahin dabcan ka helaysaa.
hase ahaatee waan kuu fududaynayaa shiikha kajaawabay su’aalahaan waxaa weeye:
Sheikh Dr. Hersi Aw. Mohamed
(Dip., B.A, M.A, Ph.D in Islamic Studies)
Takhasuska: Usul ad-Diin (al-Aqidah)
(Khibrad: 20 sano ayuu macallin iyo muxaadir ka ahaa
jaamicadaha iyo macaa-hidda iyo iskuullada,
Somalia, Jordan, Malaysia, Brunei iyo Australia).
(Mufti: Mac-hadka fatwada ee jaamicadda Islaamka ee Malaysia 2002-2004).
(Hadda wuxuu ka shaqeeyaa: Daarul fatwa- Australia).
Mar Kale Mahasanid Si Aad iyo Aad Ah Khayrna Allaha Kusiiyo Walaal.
Posted on Maarso 17, 2007 1:24 g
a/c dhamaan culumada ahlusunna waljamaaca waxaaan rabaa inaan waydiiyo culumada mabanaantahay in nin laboxo gabar oo meeshii alah keedu joogay uuka kaxays tay in uu guursado?
Posted on Juunyo 20, 2008 1:05 b
asalamu alaikum walal waan idinsalaamayaa waanad mahadsantihiin
wa alaikuma aslam
Posted on Diseembar 19, 2008 5:04 g
su aal kussabsan salada jimcaha oo marka imamku qugbada kujiro matukankaraa sunad tasanraba . A S C
Posted on Maarso 7, 2009 11:47 b
bashir mohamud jama Says:
ugu horayntii asalaamu calaykum salaantaas kadib waxaan rabaa i aan shiikha waydiiyo . maxay diintu ka qabtaa ninkii gacantiisa isaga keenay biyaha loo yaqaan shahwada . xukunkiisuna muxuu yahay haduu sidaa sameeyo . sidee ayuuna isu daahirinayaa kadib markii uu sameeyo arintaas . .fadlan su aashaan waa su aal aad muhiim u ah . ee fadlan noo da dajiya .asalaamu calaykum waraxmatulahi wa barakaatuhu
Posted on Maarso 25, 2009 5:32 g
s w w.salaan kadib culimada halkaan iskgu timd una timid ineey kajawaabaan su’aalaha diiniga ah wxaa n usheegayaa yeesa n kudag dagin su’aalah qaarkood waxaan dhihi lahaay wax soo barta ha’iska iftooninehee
Posted on Maajo 24, 2009 6:05 g
Posted on Juunyo 23, 2009 8:32 b
Asc walaalayal, waxan jeclahay in an hal su’al waydiiyo sheekhyada , sida an ognahay salaadaha sunnadah ah waa 12 ragco, maxay kala yihiin , sidee lo kala tukanaa?
Posted on Nofeembar 19, 2009 2:18 g
mashaLLAAH waa suaalo iyo jawaabo muhiim ah ,waan loo baahanyahay ,jzkl qayr
su aal asha aan qabo waxa weeye maadaama qoralkan waqti hore ahaa,mala iiga jawabayaa suaal ban qabaa hada culumada ahlusuna jzkl
Posted on Seteembar 14, 2011 4:40 g
Posted on Oktoobar 3, 2014 4:47 b